“ခရိုနီဖြစ်ဖို့  ကျနော်ကြိုးစာမည်” (Gyaw Dee) | MoeMaKa Burmese News & Media
“ခရိုနီဖြစ်ဖို့  ကျနော်ကြိုးစာမည်”
တေးပြု စာဆို “ဂျော်ဒီး”၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၂
(ခရိုနီဖြစ်ဖို့  ကျနော်ကြိုးစားမည်..
ခရိုနီဖြစ်ဖို့ကျနော်ကြိုးစားမည်..
(တတိုင်းပြည်လုံးမွဲသော်လည်း…ကျနော်တို့ တတွေ အဆင်ပြေခဲ့သည်..
ခေတ်နဲ့ အညီ ဆင်နွဲလို့ သာ.. အတူတူ ပေါင်းဆော်မည်..
စာရိတ္တဘေးခွါချလို့ …ရတာတွေ အကုန်ယူမည်..ထူးထူးခြားခြား အောင်ပွဲဆင်ခဲ့ပြီ..
ရောင်းမဗျာ.. တတိုင်းပြည်လုံး ..အရေခွံခွါယူမည် …ဘ..နဖူးတူးစရာ
အမေ့ ကိုလည်း ချွဲနိုင်ပါသည်..ပထွေးတော်..လဲ လှမ်းမျှော်ပါသည်..
ဘာကိုပင် မချန်ပါသည်..လက်ဝါးကြီးအုပ်ကာ ပေါင်းစားမည်..)
(ခရိုနီဖြစ်ဖို့ကျနော်ကြိုးစားမည်..ခရိုနီဖြစ်ဖို့ကျနော်ကြိုးစားမည်
ရှက်လည်း မရှက်ပါသည်…အခွင့် အရေး တွေးမျှော်.. ကျနော်အရောင်ပြောင်းမည်.).
မှတ်ချက်။ ။ အဆိုတော် သန်းထွန်းလေးဧ။် လူရည်ချွန်ဖြစ်ဖို့ 
ကျနော်ကြိုးစားမည်..တေးသွားအလိုက်ဖြင့်စာသားသွင်း သီဆိုနိုင်ပါတယ်..။